बेल्किनले 3,5.mm एमएम + चार्जिंग एडेप्टर आईफोनको लागि सुरू गर्दछ ग्याजेट समाचार
बेल्किनले आईफोनको लागि mm.mm मिमि + चार्जिंग एडेप्टर सुरूवात गर्‍यो
गत वर्ष, आईफोन and र आईफोन Plus प्लसको आगमनको साथ, एप्पलले क्लासिक 7. mm एमएम ज्याक कनेक्टर हटाउने कदम चालेको थियो। को विचार संग हेडफोन को लागी ताररहित हेडफोनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्, एयरपड्स जस्तै, रणनीतिक, उही दिन प्रस्तुत। अर्को विकल्प भनेको समावेशी लाईटि to्ग टु ज्याक एडाप्टरको प्रयोग गर्नु थियो (हेडफोनको कुनै पनि मोडेल प्रयोग गर्न), आफैलाई लाइटनिंग कनेक्टरको साथ केही हेडफोनहरू लिनुहोस्। अब हामीसंग अर्को विकल्प छ।
प्रख्यात उपकरण फर्म बेलकिनले सुरु गरेको छ Mm.mm मिमी अडियो एडाप्टर + चार्ज गर्दै रक स्टार, एक सानो सहायक जसले तपाइँको आईफोन चार्ज गर्न र एक साथ क्लासिक जडानकर्ताको साथ हेडफोन प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। सब भन्दा उत्सुक कुरा, यसको उच्च मूल्य को अलावा, त्यो हो एप्पल पनि यो बेच्न शुरू गरेको छ उनीहरूको पसलमा।
संगीत सुन्नुहोस् र तपाईंको आईफोन एकै समयमा बेल्किन रकस्टार एडाप्टरको साथ चार्ज गर्नुहोस्
यस नयाँ सहायकको उपयोगिताको बारे कुनै शंका छैन जुन बेलकिनले मोडको लागि बजारमा ल्याएको छ? को मूल्य 34,99 यूरो यद्यपि यो विडम्बनाको कुरा हो कि, हाम्रो जीवनबाट केबुलहरू हटाउने बहानामा, एप्पलले यो सामान बेच्छ उनीहरूको पसलमा। आउनुहोस्, यसले हामीलाई एक केबललाई प्रतिस्थापन गर्न धक्का दिन्छ जुन पहिले एक्सेसरीका लागि निःशुल्क थियो जुन अब € ...34,99। लागत गर्दछ। हो, मलाई थाहा छ कि निर्माता एप्पल होइन, तर कफर्टिनो कम्पनीले दुबै MFi मुहरको साथ र यसलाई सिधा बेचेर यसको अनुमोदन दिन्छ।
नयाँ रक स्टार बेल्किन एप्पलको आफ्नै केबल कारखाना बाहिरको जस्तो देखिन्छ। मा मूल सेतो समाप्त, एक अन्त मा एक छ पुरुष लाइटनिंग कनेक्टर कि तपाईं आफ्नो आईफोन connect, Plus प्लस,,, Plus प्लस वा एक्स जडान गर्दा अर्को छेउमा यसले महिला लाइटनिंग कनेक्टर र 3,55 एमएम जैक प्लग प्रदान गर्दछ। यस तरिकाले तपाईं बाह्य ब्याट्री जडान गर्न सक्नुहुनेछ वा हेडफोन वा स्पिकरहरू मार्फत तपाईंको मनपर्ने संगीत सुन्नुहुँदा यसलाई विद्युतीय प्रवाहमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं यो विचारको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के तपाई यो एडप्टर लिने योजना गर्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » ग्याजेटहरू » Accesorios » बेल्किनले आईफोनको लागि mm.mm मिमि + चार्जिंग एडेप्टर सुरूवात गर्‍यो
हामी S-Box, एक सेतो लेबल टिभी बक्स र राम्रो प्रदर्शनको विश्लेषण गर्दछौं